Ny sarivongan’ny tanàndehibe mahavariana any Torkia – zavatra kanto sa rafitra kanto tsy mahomby? · Global Voices teny Malagasy
Manahoana ny zavakanto sy ny kolikoly amin'ireo sarivongana an-tanàndehiben'i Torkia
Voadika ny 17 Jolay 2021 4:11 GMT
Pikantsary nalaina tamin'ny horonantsary BBC Turkce mampiseho ny tsangambaton'ny tanàndehibe manerana an'i Torkia https://www.youtube.com/watch?v=qc4QN6SVZHs&t=2s
Malaza amin'ny sarivongana maro manan-tantara sy mahatalanjona izay manome ireo mpitsidika zavatra betsaka hojerena sy hozahana i Torkia, saingy vitsy no mahalala ny sarivongan'ny tanàndehibe mahavariana eo am-pidirana amin'ireo faritany ao Torkia sy ny ao afovoan-tanàna. Manerana ny firenena, afaka mahita ireo sarivongana maro isankarazany natao sarina tongolo lay, akoholahy, hena baolina, tsindrin-tsakafo avy eo an-toerana, noa (noix), tanimanga, ary ny maro hafa ny olona, izay maneho ny zavatra mampalaza ilay faritany. Ny sarina zaza iray ao anaty voanketsihetsy (pasteky) izay napetraka tao amin'ny faritanin'i Diyarbakir any Torkia tamin'ny volana Mey no nanampy vao haingana indrindra tamin'ny lisitr'ireo sarivongana hafahafa.
Ny sarivongana vaovao an'ilay zazakely mipetraka ao anaty voanketsihetsy (pasteky) eo amin'ny bolam-pihodinan'ny seranam-piaramanidina Diyarbakir
Noforonina ho fanomezam-boninahitra ireo voanketsihetsy ao amin'ilay faritra sy ny fomban-drazana amin'ny fakana sary ireo zaza ao anaty voanketsihetsy vita sokitra mba hanasongadinana ny haben'ilay voankazo. Niteraka tsikera an-tserasera ilay sarivongana ary niteraka adihevitra momba ny fahazaran'i Torkia amin'ny sarivongana hafahafa sy ny halafon'ny vidiny.
Raha ny filazan'ny Gazete Duvar, seha-baovao an-tserasera iray, “nangataka tamin'ny kaominina mba hanambara ny vidin'ilay asa kanto hafahafa ny mpiseran'ny tambajotra sosialy iray, sy ny an'ilay sarivongan-dehilahy mampiseho vatomamy eo an-toerana izay naseho tamin'izany fotoana izany ihany koa. Tompon'andraikitra notendren'ny governemanta no mitantana ny kaominina amin'izao fotoana izao, izay fantatra amin'ny fandaniam-bola mihoapampana nefa tsy mangarahara.”
Voalaza fa mitentina 4,4 tapitrisa Lira Tiorka (517.000 dolara amerikana) ilay sarivongan'ny voanketsihetsy ao Diyarbakir.
Tsy vao voalohany no nanontaniana ny vidin'ireo sarivongana natsangana.
Ao amin'ny faritany Tiorka ao Amasya, mailaka niaro ny sarivongan'ny printsy Ottoman iray maka sary selfie ny ben'ny tanàna eo an-toerana rehefa nimenomenona tamin'ny fandaniam-bolam-bahoaka ny mpanao politika mpanohitra iray.
Ity no sarivongana maka selfie voalohany eran-tany. Mendrika omena loka izany.
Tamin'ny taona 2015, voalaza ilay sarivongana T-Rex manana haavo telo metatra sy halavana 10 metatra natsangana tao Ankara renivohitr'i Torkia fa mitentina 1 tapitrisa Lira Tiorka (tokony ho 4 tapitrisa dolara amerikana raha tamin'ny sandam-bola tamin'izany fotoana izany). Nanolo ilay sarivongana Transformers nampiady hevitra ny T-Rex, samy nampanaovin'ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany sady mpikambana ao amin'ny antokon'ny fitondrana Rariny sy Fampandrosoana, Melih Gökçek ireo sarivongana roa ireo.
Ilay sarivongana dinôzôro tao Ankara T-Rex renivohitra Tiorka nanolo ny raboto Transformers
Natsangana ho toy ny ampahany amin'ny fampiroboroboana ho an'ny valan-javaboary AnkaPark (fantatra koa amin'ny anarana hoe Wonderland Eurasia) ny sarivongana raboto. Nampanaovin'i Gökçek ilay valan-javaboary, izay ahitana raboto sy dinôzôro ary mitentina 750 tapitrisa dolara amerikana araka ny vaovao Ahval. Saingy tsy nanatrika ny fanokafana izany mihitsy i Gökçek satria noterena hiala izy tamin'ny taona 2017. Namaritra izany ho “mariky ny fireharehan'i Torkia” ny filoha Erdogan izay nanatrika ny fanokafana ny valan-javaboary tamin'ny volana Martsa 2019. Saingy tsy nahatanteraka ny zavatra nandrasana taminy akory ny “mariky ny fireharehana” satria noterena hikatona ilay valan-javaboary tamin'ny volana Febroary 2020 rehefa tsy nahaloa ny volan'ny herinaratra ilay orinasa tompon'andraikitra tamin'ny fitantanana ilay valan-javaboary.
Tsy nangarahara ny teti-bolan'ireo sarivongana ireo ary matetika misy ifandraisany amin'ny kolikoly ataon'ny governemanta eo an-toerana. Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny BBC, nilaza ny mpandrindra ny tanàna Tiorka Meltem Parlak , fa mba hampangarahara ny dingana dia “tokony hanontany ny mpanao sary sokitra aloha ny kaominina, na mikarakara fifaninana malalaka, ary izay vao manapa-kevitra. Tsy nanao izany anefa ny kaominina fa nanendry orinasa sasantsasany fotsiny amin'ilay antsoina hoe tolo-barotra, ka miteraka ny tontolon'ny fanaovana kolikoly.”
Natao komandy tamin'ny alàlan'ny orinasa tsy miankina ny ankamaroan'ireo sarivongana ireo araka ny voalazan'ny gazety Tiorka Hurriyet. Saingy tsy nisy na iray aza tamin'ireo fikambanana nantsoin'ilay gazety no vonona ny hitaky sarivongana manokana. Fa nanome tsiny ny kaominina ihany koa izy ireo tamin'ny asa tsy lavorary manimba ny lazan'ireo orinasa ireo. “Tsy miraharaha izany ireo kaominina. Tokony hifampidinika amin'ny mpanakanto izy ireo, hanakarama mpanolo-tsaina. Nefa tsy nanao izany. Vokatr'izany, voatsikera ihany koa izahay,” hoy i Yakup Koçak, tompona orinasa kely iray mpanao sary sokitra.
Manaiky ihany koa ny sojabe teo aloha tao amin'ny Oniversite Marmara sampana Zavakanto sady mpanorina ny Mozea Baksı Hüsamettin Koçan fa manana andraikitra hitady mpanakanto efa za-draharaha tsara ofana ny manampahefana tompon'andraikitra. “Raha miahy ny fandraisan'ny zavakanto anjara ho an'ny tanàndehibe isika dia tsy maintsy manaiky ny manampahefana fa sehatra ilaina fahaizana manokana ny resaka zavakanto sy ny hatsaran-javatra ary tokony mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany izy ireo,” hoy i Hurriyet tamin'ny antsafa nifanaovana taminy.
Hatramin'ny fotoana nanoratana dia mbola tsy misy andraikitra na tompon'andraikitra tamin'ny fandaniana na ny hatsaran'ny sarivongana izay azo inoana fa hanohy hiteraka vazivazy sy tsikera avy amin'ireo izay hahita ny zava-mahatalanjona maoderina miroborobo any Torkia.